Saw Ngo | MoeMaKa Burmese News & Media
ကာတွန်းစောငို - ပြည့်အင်အားသည် ပြည်တွင်းမှာသာ ရှိသည် ဆိုလားပဲ
ကာတွန်း စောငို - ဆိုကြမယ် ကကြမယ် အစီအစဉ်သစ် - Saw Ngo
Saw Ngo - Census not Audit ...
Cartoon Saw Ngo - The No 1 Powerful Man of Burma
ကာတွန်းစောငို – ပြည့်အင်အားသည် ပြည်တွင်းမှာသာ ရှိသည် ဆိုလားပဲ
ကာတွန်းစောငို – ပြည့်အင်အားသည် ပြည်တွင်းမှာသာ ရှိသည် ဆိုလားပဲ ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၄ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းစောငို – မန်ဒဲလားအတွက် ၀မ်းနည်းကာတွန်း
ကာတွန်းစောငို – မန်ဒဲလားအတွက် ၀မ်းနည်းကာတွန်း ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း စောငို – ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနေသည်၊ မဟောင်ပါနဲ့
ကာတွန်း စောငို – ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနေသည်၊ မဟောင်ပါနဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းစောငို – လျပ်စစ်မီးလားဟေ့ … တရုတ်ပြည်မှာ
ကာတွန်းစောငို – လျပ်စစ်မီးလားဟေ့ … တရုတ်ပြည်မှာ နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း စောငို – ဆိုကြမယ် ကကြမယ် အစီအစဉ်သစ် နိုဝင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း စောငို – အခန်းဆက်ပြဇာတ်ရှည်
ကာတွန်း စောငို – အခန်းဆက်ပြဇာတ်ရှည် နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း စောငို – ဘာလဲဟဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး
ကာတွန်း စောငို – ဘာလဲဟဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းစောငို – ဗုံးတို့၏ မာယာ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းစောငို – လာမကြောနဲ့ မောသွားမယ်
ကာတွန်းစောငို – လာမကြောနဲ့ မောသွားမယ် အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းစောငို – အာဆီယံ၏ မျက်နှာသစ်ကလေး
ကာတွန်းစောငို – အာဆီယံ၏ မျက်နှာသစ်ကလေး အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Saw Ngo –
ကာတွန်းစောငို – လေးစားလို်က်နာ၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက် … စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Saw Ngo – Respect, Abide, Defend and Protect ….
ကာတွန်း စောငို – လေးစားလိုက်နာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ် ဆိုတာ … စက်တင်ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related...
Saw Ngo – No Choice for Burma
ကာတွန်းစောငို – မိုးပေါ် ထောင်မပစ်ဘူး … စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Saw Ngo – Save the money from Burma
ကာတွန်း စောငို – ၁၁ မီးငြိမ်းဖို့ ၁၁ ဘီလျံ စုကြစို့ … စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts...
Saw Ngo – Census not Audit …
ကာတွန်းစောငို – သန်းကောင်စာရင်းပဲ စစ်ပါ။ ဘဏ်စာရင်း မစစ်ကြပါနဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Saw Ngo – Regime perfoms its duties
ကာတွန်းစောငို – သူတို့အလုပ် သူတို့ တာဝန်ကျေပါတယ် … စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Saw Ngo – Long awaited silence from Khin Nyunt
ကာတွန်းစောငို – မပြောချင်လို့ ဒို့ထောင်ထဲဝင်နေခဲ့တာ ကြာဘီ စက်တင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Saw Ngo – Regime’s Law
ကာတွန်းစောငို – စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ မျိုးဖြုတ်ဥပဒေ … စက်တင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Saw Ngo – Regime’s Bank
ကာတွန်းစောငို – ဘယ်က ဘဏ်လဲ၊ ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက် စက်တင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.